Uvelaphi Ubhontshisi We-Vanilla? - Amathiphu Engadi
Uvelaphi Ubhontshisi We-Vanilla?
Uma uphuza i-latte enamakha edingekayo kakhulu ekuseni noma ubona lezo zinhlayiya ze-vanilla zixutshwe no-ayisikhilimu wakho, wake uzibuze, “Zivelaphi ubhontshisi we-vanilla?”
Ingabe yimikhiqizo yemvelo? Kungani zibiza kangaka? Ungakwazi yini ukuzikhulisa wena futhi ungavumi ukukhokha yonke leyo mali yamaphodwe kabhontshisi omisiwe we-vanilla?
Iqiniso ukuthi, i-vanilla inomlando omuhle othakazelisayo futhi kuningi ongakufunda ngalesi sitshalo esimnandi (futhi esiwusizo). Ake siqale.
Kulokhu Okuthunyelwe, Uzofunda:
Impela iyini i-vanilla nokuthi ivelaphi
Ilinywa kanjani i-vanilla
Yikuphi ukukhishwa kwe-vanilla okufakelwayo futhi uma kukuhle kuwe
Ungathenga kanjani ubhontshisi we-vanilla
Indlela yokutshala ubhontshisi we-vanilla ekhaya
Noma i-vanilla kungaba okwenziwe - futhi sizofika kulokho kancane - ubhontshisi we-vanilla ungokwemvelo ngokuphelele. Yimikhiqizo yesitshalo, iVanilla planifolia.
Zikhula kuphi i-vanilla beans?
ungenza izinwele zakho zikhule ngokushesha
Ubhontshisi ungowokuzalwa eNew World futhi ukhula usuka eMexico uye eBrazil. Ama-Aztec abesebenzisa ukunambitheka kweziphuzo zawo zikashokolethi nobhontshisi we-vanilla. Abanqobi baseSpain bathola i-vanilla njengoba iheha futhi bayibuyisela eYurophu.
Kukhona nohlobo lwe-vanilla olutshalwa ezentengiselwano eHawaii naseTahiti, kanti futhi lungeniswe naseMadagascar naseRéunion. IRéunion, ngasendleleni, lapho abatshali bafunda khona ukufaka impova esandleni se-vanilla. Le ndlela yasungulwa yisigqila esigama laso URichard Wilhelm , owayeneminyaka engu-12 kuphela ngaleso sikhathi.
Lesi sitshalo sidinga ukuvotelwa impova ngokufakelwa uma sikhuliswe ngaphandle kwendawo yaso. Lokhu kungenxa yokuthi, esikhathini esiyiminyaka eyizinkulungwane, wakha ubudlelwano bokufanelana nohlobo oluthile lwezinyosi olubizwa ngokuthi iMelipona. Le yinyosi encane, enganqeni enamehlo amakhulu aluhlaza okwesibhakabhaka athathelwa indawo kancane izinyosi zezinyosi zaseYurophu nezase-Afrika, eziqala ukusebenza ekuseni kakhulu futhi ezingakhethi njengezimbali ezizivakashelayo.
IVanilla planifolia ngumvini okhuphukayo onesiqu esigwegwile namaqabunga enjoloba. Ekugcineni, lesi sitshalo sikhiqiza imbali enhle ye-orchid ehlala usuku olulodwa kuphela. Uma ama-orchid enziwe ngempova phakathi naleso sikhathi, lesi sitshalo sibuye sikhiqize ama-seedpods angaba yifidi ubude.
Ngempela, igama elithi vanilla livela kwelaseSpain elisho “imbotshana encane.” Isitshalo esitshaliwe siphila cishe iminyaka eyi-10 bese siqala ukukhiqiza uma cishe sineminyaka emithathu ubudala.
Ama-vanilla pods ane-pulp enamafutha, ngombala omnyama, okufakwe kuyo imbewu eningi encane. Ama-pods akhethwa uma engakavuthwa kahle futhi anombala oluhlaza okwephuzi. Ngaleso sikhathi bagcwaliswa ngenhlanganisela ebizwa ngokuthi i-glucovanillin.
Le yimolekyuli ye-vanillin, noma i-4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, enamathiselwe kwi-molecule ye-glucose, noma ushukela olula. Ama-pods abese ethathwa aphulukiswe ngenqubo ende yamaviki amathathu noma amane yokoma nokujuluka kuze kuqale iphunga nokunambitheka. Ngaleso sikhathi sezinciphile futhi zaba mnyama, kanti i-glucose ne-vanillin sehlukene, kwasala i-vanillin.
Inqubo yokwenza i-vanilla extract iyinkimbinkimbi futhi iyabiza. Ngokuyinhloko, ubhontshisi ugaywa uze ube izingcezu ezincane eziqukethe cishe amaphesenti amabili e-vanillin. Bese kugcwele amanzi notshwala namanani amancane ezinye izinto.
Yize ukukhishwa okuningi kwe-vanilla kuhamba ibanga elide, ikakhulukazi utshwala namanzi. Eqinisweni, umthetho wase-United States uthi ukukhishwa kwe-vanilla kumele iqukathe okungenani amaphesenti angama-35 otshwala nama-ounces ayi-13.35 kabhontshisi we-vanilla ngelitha ngalinye . Ngoba ukwenza i-vanilla yangempela kukhipha kubiza kakhulu, ososayensi bathole izindlela zokwenza i-vanilla yokufakelwa.
Khipha i-Vanilla Artificial
Inqubo eyodwa yokwenza i-vanilla yokufakelwa yapheleliswa ngokusebenzisa izinsalela zokukhiqizwa kwamaphepha, ikakhulukazi i-lignan esele ku-pulp yokhuni. Inqubo yesimanjemanje yenza ivanilla ikhishwe kuyo, ikholelwe noma cha, izibaseli ezimbiwa phansi.
Abanye abantu yenza i-vanilla elula ngokufaka ama-pods embizeni ende ubude obanele ukuwabamba bese uwavumela angene ku-vodka isikhathi esingangenyanga.
imibala ebomvu yezinwele
Lapho kuthengwa, ama-vanilla pods kufanele ithambile, umbala ocebile, omnyama kashokoledi futhi impela unephunga elimnandi. Kufanele zikhonjwe ngakolunye uhlangothi futhi zibe neqhwa elincane, okuyi- i-vanillin essence .
Enye indlela enhle yokugcina i-vanilla pod ukuyifaka embizeni kashukela, ezonikeza ushukela umbono we-vanilla flavour. Enye indlela yokwengeza ukunambitheka kuma-pudding noma ku-custard ukulimaza ubhontshisi we-vanilla bese ukungeza obisini olubabayo noma ukhilimu. Izindaba ezimnandi ukuthi i-pod ingakhishwa, igezwe kancane iphinde isetshenziswe futhi.
Ungayikhulisa kanjani i-Vanilla
IVanilla isitshalo sezindawo ezishisayo ezithanda izinto ezishisayo nezinomswakama. Kepha ingatshalwa endaweni yokugcina izithombo, noma kuyikhulisa kakhulu.
Inhlabathi idinga ukunotha, i-loamy, i-acidic futhi ibe nokugeleza okuhle. Lesi sitshalo sondla kanzima futhi sidinga ukufakwa ngotshani futhi sifakwe umquba onjengomquba wenkukhu, ukusakazwa kwezikelemu namakhekhe kawoyela. Njengomvini, i-orchid nayo izodinga ukuxhaswa. Lapho i-orchid ivula kufanele ifakwe impova ngesandla ngesikhathi esisodwa ukuze ikhiqize i-pod. Le ndlela ekhohlisayo idinga inhlamvu yotshani noma i-toothpick.
Lesi sitshalo sidinga futhi ukuvikelwa ezifweni nasezinambuzane. Ukukhuluma nje, ukube benginguwe, bengimane ngithenge ama-vanilla pods ami bese ngikhipha esitolo.
Uma kufanele uzame futhi ukuzikhulisa ngokwakho, nansi umhlahlandlela omuhle:
Ubhontshisi ohamba phambili we-Vanilla, ama-Extracts, nama-Flavourings
Ibanga A Amabhontshisi we-Bourbon Vanilla we-Madagascar
I-Nielsen Massey Madagascar Bourbon Pure Vanilla Pure
Kit okuzenzela Vanilla Khipha
I-Vanilla ingenye yezinambitheka ezithandwa kakhulu emhlabeni, kepha ingabe kufanelekile ngenkinga edingekayo ukukhulisa umvini, ukuhlakulela imidumba yawo nokukhipha? Yize abapheki bengakugwema ukusetshenziswa kokukhishwa kwe-vanilla okufakelwayo, ama-tasters awutholi mehluko phakathi kwezinto zangempela nezinto zokwenziwa . Noma kunjalo, lezo zinhlayiya zobhontshisi we-vanilla ku-ayisikhilimu wakho azinakubuyiselwa.
Usukhulile i-vanilla? Ingabe ukhetha okwenziwe noma okwemvelo? Ngazise kumazwana angezansi!
yini eyenza izinwele zakho zikhule ngokushesha
izindleko zesilevu eziphakeme eduze kwami
izitayela zezinwele ezimfishane ngaphambili nangemuva kokubuka u-2018
lokhu ukubiza ngesivunguvungu